Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Grenada » Duulimaadyo badan oo Grenada ah oo ka imanaya USA iyo Canada hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Kanada • Caribbean • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Kariibiyaanka ayaa si gaar ah u soo jiidanaysa Waqooyiga Ameerika oo durbaba ka baqaya mugdiga hore iyo heerkulka qabow.
Air Canada Mainline waxay dib u bilaabi doontaa adeegga tooska ah, laba jeer toddobaadkii, (Arbacada iyo Axadda) laga bilaabo Madaarka Caalamiga ah ee Toronto Pearson (YYZ) ilaa Maurice Bishop International Airport (GND) laga bilaabo Oktoobar 31.
JetBlue waxay bixisaa adeeg maalinle ah oo laga soo qaado John F. Kennedy Airport (JFK) ilaa Maurice Bishop International Airport (GND). Diyaaradda Mint -ka ee qaaliga ah ayaa shaqaysa Sabtida.
American Airlines waxay bixisaa adeeg, toddobaadkii laba jeer, laga bilaabo Madaarka Caalamiga ah ee Miami (MIA) ilaa Maurice Bishop International Airport (GND) Arbacada iyo Sabtida.
The Maamulka Dalxiiska Grenada (GTA) lagu dhawaaqay maanta halka loo socdo ayaa noqon doonta mid aad loo sii heli karo iyada oo la kordhiyay duulimaadyada diyaaradaha ee Mareykanka iyo dib u bilaabista adeegga Canada. Waqtigu wuxuu yimaadaa ka hor xilliga jiilaalka, si rasmi ah waqtiga SAD iyo marka Kariibiyaanka ay si gaar ah u soo jiidanayso Waqooyiga Ameerika oo durba ka baqaya mugdiga hore iyo heerkulka qabow.
“Markay dadku dib u soo celiyaan xiisihii ay u qabeen safarka, wada-hawlgalayaashayada diyaaraduhu waxay aqoonsadaan qiimaha ay siiso isku xirnaanta jasiiraddeena gaarka ah. Runtii waxaan nahay gogol jannada ah oo leh dabeecad hoose, dad diirran oo soo dhaweyn leh, iyo bixinno isku xira booqdayaasha ma aha oo kaliya dabeecadda iyo xiisaha biyaha ee cajiibka ah, laakiin sidoo kale leh safar cunno oo xiiso leh ”ayay tiri Petra Roach, Maamulaha, Maamulka Dalxiiska Grenada. “Adeegga hawada ee cusub oo la ballaariyey wuxuu Grenada ka caawinayaa inay dib u hesho booskeedii oo ahaa meel aad u soo jiidasho leh oo loogu talagalay booqdayaasha raadinaya waayo -aragnimada Kariibiyaanka.”
Soo -ururinta cusboonaysiinta hawada sare waxaa ka mid ah:
Laga soo bilaabo Maraykanka
JetBlue waxay bixisaa adeeg maalinle ah laga bilaabo John F. Kennedy Airport (JFK) ilaa Maurice Bishop International Airport (GND). Diyaaradda Mint -ka ee qaaliga ah ayaa shaqaysa Sabtida.
Laga bilaabo Noofambar 2, adeeggu wuxuu shaqeeyaa saddex jeer toddobaadkii (Arbacada, Jimcaha iyo Sabtida). Adeegga maalinlaha ah wuxuu bilaabmaa December 1.
Laga bilaabo Nofeembar 27, adeegga ka yimaada Madaarka Caalamiga ah ee Charlotte Douglas (CLT), wuxuu shaqeeyaa toddobaadkii hal mar Sabtida.
Ka yimid Kanada
Sunwing ayaa la filayaa inay toddobaadkiiba mar bixiso adeeg laga bilaabo Madaarka Caalamiga ah ee Toronto Pearson (YYZ) ilaa Maurice Bishop International Airport (GND) laga bilaabo Nofeembar 7.
Lufthansa waxay ku dartay afar diyaaradood oo cusub oo ah Airbus A350-900 oo ay ku raaci doonto maraakiibta
Dib u soo kabashada safarka xagaaga ee Yurub ayaa fashilmay
Warbixinta cusub ee WTTC si loo wado soo kabashada iyo kor u qaadista ...
Xafiiska Dalxiiska ee Bahamas ee Paris ayaa la xiray Sababo la xiriira ...
Wax Ka Baro Medicare Maanta Webinar Online Ah Oo Bilaash Ah
CDC waxay soo saartay tilmaamo degdeg ah Pfizer ama Moderna...